Safaarada UK Soomaaliya oo beenisay in ay taageertay Mudo kordhinta Villa Somaliya aqriso Warka Safaarada | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Safaarada UK Soomaaliya oo beenisay in ay taageertay Mudo...
Safaarada UK Soomaaliya oo beenisay in ay taageertay Mudo kordhinta Villa Somaliya aqriso Warka Safaarada
Safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Kate Foster, ayaa beenisay war ay faafisay xukuumadda Soomaaliya, kaas oo ku saabsan kulan dhexmaray safiirka iyo Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka, Mahdi Maxamed Guuleed.
Af-hayeenka xukuumadda Federaalka, Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa sheegay in kulanka labada mas’uul looga hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada waddan ee dhinacyada Amniga iyo dhaqaalaha.
Balse, waxa warkaas beenisay safiirka Ingiriiska mrs. Kate Foster, taas oo sheegtay in ay Ra’iisul wasaare ku xigeenka kala hadashay xaaladda siyaasadeed ee ka aloosan Soomaaliya, gaar ahaanna mudda kordhinta loo sameeyay dowladda.
“Waxa Ra’isul Wasaare ku Xigeenka loo sheegay in dowladda UK aysan taageeri doonin muddo kordhin. Waxayna madaxda Soomaalida u soo jeedisay in miiska wada hadalka dib loogu laabto.” Ayay tiri safiirka UK u qaabilsan Soomaaliya.
Previous articleFilim qurux badan bay maanta Jileen taliskq Ciidanka boliiska Soomaliya
Next articleBanaanbax xoog leh oo goor dhawayd ka bilaawday xaafadda Shiirkole ee degmada Hodan..
Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in duqeyn ay diyaaradaha Israa'iil ka geysteen xero qaxooti oo ku taal Gaza ay ku dhinteen ugu yaraan...
Taariikhdii Cabdiqaasim iyo Cabdullaahi Yuusuf oo mar kale dib isu qoreysa...